Volley-ball Analamanga: hiditra amin’ny manasa-dalana ny fihaonana | NewsMada
Volley-ball Analamanga: hiditra amin’ny manasa-dalana ny fihaonana
Hotanterahina, anio asabotsy ary hitohy rahampitso alahady etsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina, ireo lalao manasa-dalana, hiadiana ny ho tompondakan’ny ligin’Analamanga, taranja volley-ball. Hiady lohany, amin’ity, ny sokajy “benjamin” lahy sy vavy, ny “minime” vehivavy, ny “cadet, cadette”, ny “junior” lahy sy vavy, ny “senior” vehivavy ary ny “D2” sy ny “D1” lehilahy .
Anisan’ny fihaonana eo amin’ny “senior” vehivavy ny fifanandrinan’ny ASI Itaosy sy ny VBCD. Nifanahantsahana ny fandresena raha teo amin’ny fihaonan’ny roa tonta ka tsontsori-mamba hisarahana ity. Samy manana ireo mpilalao kalaza ihany koa ny andaniny sy ny ankilany.
Raha tsiahivina, laharana faharoa ny VBCD izay tompon’ny anaram-boninahitra farany, nandritra ny fifanintsanana, raha fahenina kosa ny ASI. Etsy ankilany, hifanazava ny Bi’As sy ny AMVB. Fifandonan’ny ekipa voalohany, ny Bi’As, sy ny AMVB (B), fahadimy.
Eo amin’ny D1 lehilahy indray, adin’ny samy tafika ny fifandonan’ny Cosfa sy ny JSA (B) na ny zandary Vakinankaratra ary ny GNVB, tompondakan’Analamanga farany, sy ny JSA (A).
Eo amin’ny sokajy D2 lehilahy ihany, hifampitana ny SDV sy ny AVB ary ny VBC Jak kosa, hikatroka amin’ny Pole A.